Kutheni kufuneka ukhuseleko motor breakers circuit MPCB
ngomphathi ku 18-08-13
Yintoni: olamlo yesekethe motor Magnetic Ezi circuit breakers ukukhusela izityalo evela kwiziphaluka ezimfutshane ngaphakathi kwimida umthamo wabo ngokuqhekezwa kwaye esebenzisa ezingasenza zemagneti (esinye isigaba ngasinye). breaking yesekethe Magnetic zonke-kwipali ukusuka ekuqaleni: omnye imbangela magnetic uya iphuma ...
NEMA VS IEC: kungcono ngokugqibeleleyo?
Njengoko ngokuba contactors zombane ezahlukeneyo ezininzi kangaka kunye straters ukuba akhethe, usenokuba ube ukwazi malunga iingenelo neengozi IEC vs NEMA rated izixhobo. Makhe Nofuel amandla chaza malunga mibutho ezimbini ezahlukeneyo imigangatho leyo ubani kuhambelana isicelo sakho ekujoliswe best! Yintoni NEMA ...
izisombululo ulawulo Umatshini HVAC & R
iinkqubo ezithembekileyo,-eyonga HVAC & R * zibaluleke, amacandelo kuyilo, ulwakhiwo, kunye nokusebenza izakhiwo mveliso kunye zorhwebo high-imfuno - nasekunikezeni intuthuzelo elilelona ukuba abahlali babo. Ngoko ke, kucacile ukuba uyalufuna kweyoqobo Equipment Man ...
Indlela yokukhetha thermal ukuxinana relay, isimo sentlalo nokulungelelanisa
baphinde omninzi thermal iingcinga zokhuselo esetyenziselwa ukhuselo omninzi yeemowutha zombane, contactors okanye ezinye izixhobo zombane neziphaluka zombane. Xa lo msebenzi we-injini, ezifana berhuqa umatshini yemveliso emsebenzini, ukuba umatshini aziqhelekanga okanye isiphaluka yi ab ...
Indlela Ukhetho Ukunakekelwa Breaker Circuit
INDLELA Khetha IEC lwekontraka
1.What i IEC lwekontraka? IEC lwekontraka luhlobo kwezixhobo ziguquka oluzenzekelayo esebenzisa umsebenzi intsimbi magnetic ngokungqinelana umqondiso igalelo langaphandle, kwaye njalo inxibelelanisa okanye disconnects i-AC, DC wesekethe ezingundoqo kunye enkulu yesekethe ulawulo umthamo. njengefama controllin ...